Uvimba we-usd / cad
Udidi: Usd / cad
Isicwangciso se-USDCAD sokuchitheka ngaphantsi njengoko isondela kwelinye iNqanaba leXabiso
Uhlalutyo lwexabiso le-USDCAD-Disemba 8
I-USDCAD iceba ukuchithwa ngaphantsi njengoko ihambela kwelinye inqanaba elibalulekileyo le-1.26100 kwi-bearish moment. Abathengisi bayakwazi ukuguqula isimo sexabiso ukuze baqhubeke kwicala labo. Oku kwenzeke ngenxa yamandla asetyenziswa ziibhere, njengoko ziphumelela ukuthoba amaxabiso ezantsi. Nangona kunjalo, imarike, ngoko ke, iceba ukuphalala ukuze iqhubeke i-downtrend njengoko i-bearish iqhubeka.
USDCAD Amanqanaba aBalulekileyo:
Amanqanaba okumelana: 1.28400, 1.21.2600
Amanqanaba enkxaso: 1.24800, 1.23080
I-USDCAD yexesha elide yokuhamba: Thwala
Imakethi ye-USDCAD yaqala ngentengiso yeenkunzi zeenkomo. Iinkunzi ziphinde zavelisa ukunyuka kwamaxabiso ukuya phezulu njengoko imarike iqhubekile nokuhamba komyalelo. Ke ngoko, singqina amandla eenkunzi zenkomo kwimarike ye-USDCAD, kwaye ixabiso liqala ukuhlanganisana phambili kwindlela ye-bullish njengoko iphendula kumgca wendlela yesakhiwo semarike. Inyathelo lexabiso lemarike kwelinye icala, liwuhloniphile lo mmandla, njengoko ukunyuka kwamaxabiso kusabela kulo mgca. Imarike yenkomo yaqala yaqala uhambo lwayo ukusuka kwinqanaba elibalulekileyo le-1.23080, kwaye imarike ebangelwa yinkunzi yenkomo yayibandakanya kwinqanaba elibalulekileyo le-1.28400.
Iibhere kwimarike zikrolwe kwimarike emva kokuchukumisa malunga ne-1.28400 inqanaba elibalulekileyo. Ixabiso, nangona kunjalo, lingeniswe kwimpembelelo yeebhere. I-USDCAD, ke ngoko, iphumelele ukwaphula ubume bomgca wendlela kwaye intengiso yafumana ukuqhawuka ngakumbi kumanqanaba asezantsi. Ukulandela oko, iinkunzi zenkomo zabuyisela ixabiso ukuvavanya kwakhona ubume be-trendline. Imeko yangoku kwimarike ibonisa ukuhamba kwexabiso ukuhla. I-RSI (I-Relative Strength Index) ibonisa ukuhamba kwexabiso kwinqanaba eliphakathi njengoko iibhere ziceba ukuphalaza ixabiso kwelinye inqanaba elibalulekileyo.
I-USDCAD yeXesha eliFutshane leNdlela: Thwala
Itshathi yeeyure ze-4 isenza sibone impembelelo ye-bearish movement kwimarike njengoko amaxabiso aqhubeka ekhwela ezantsi. Imarike ilindele ukuhla okuthe kratya kwintshukumo yexabiso njengoko ilungiselela ukutyhutyha inqanaba lexabiso le-1.26100, ngoko ke umfutho kulindeleke ukuba unyuke kwakhona.
I-USDCAD ivuselela ukukhwela ngaphezulu kwe-1.26500
Uhlalutyo lwe-USDCAD - Novemba 25
I-USDCAD ivuselela kwaye ikhuphuke ibuyele ngaphaya kwezinga lexabiso le-1.26500. Imakethi ibisenza intshukumo ezinzileyo ukuya phezulu ukusukela oko yehla ukuya kwi-1.23000. Ixabiso lisebenzise isicwangciso sokuvavanya kwakhona kunye nekhefu ukuyisusa kumanqanaba amaninzi abalulekileyo. Inkcaso enkulu kwintshukumo ehamba phambili yemarike ifumaneka kwi-1.25790. Ixabiso libuyisela kwi-1.24700 inkxaso ngaphambi kokutyhala kwinqanaba elibalulekileyo.
USDCAD Amanqanaba abalulekileyo
Amanqanaba okumelana: 1.28300, 1.26500, 1.25790
Amanqanaba enkxaso: 1.24700, 1.23000, 1.20300
I-USDCAD ivuselela ukuqhubela phambili umkhankaso wayo wokunyusa owaqala kwinqanaba le-1.20300 ukusuka phakathi koMeyi ukuya phakathi kukaJuni. Olona phawu luphambili lokunyuka kwexabiso lokunyuka kukuba libuyela umva kwaye lidlule kwinqanaba elibalulekileyo. Le yindlela yokuhamba ye-USDCAD ukunyuka ngaphezu kwe-1.26500 inqanaba elibalulekileyo. Nangona kunjalo, ukunyuka kwemarike kwakunganelanga ukudlula kwi-1.28300 ukuchasana, kodwa ukuphazamiseka kwexabiso kunokubonwa njengama-wicks amade agqobhoza ngokuchasa.
Iibhere zingena ukuphembelela imarike kweli nqanaba, kwaye ekugqibeleni, ixabiso liyehla ukuze lihlehlise yonke inkqubela yalo yangaphambili. Nangona kunjalo, i-USDCAD ivuselela ngaphezu kwezinga lexabiso le-1.23000, eliphantsi kakhulu njengoko umkhankaso we-bullish uqhubeka. Ixesha le-MA le-20 (i-Average Moving) lisebenza njengenkxaso kwimarike. Ipatheni yokuqhubela phezulu ingabonwa kumgca wesignali we-RSI (I-Relative Strength Index).
Okwangoku, ixabiso liye labuyela kwi-1.26500, njengoko liye lihambelana nalo lonke ukunyuka kwalo. Ixesha le-MA le-20 liqhubeka liyinkxaso eqinile yemarike kwitshati yeeyure ze-4. Nangona kunjalo, umgca wesignali we-RSI uye wachatshazelwa kukubuyiswa kwakhona kwiimarike njengoko uhla kumanqaku angama-50. Ngakolunye uhlangothi, iinkunzi zenkomo ziya kubuya ukuze ziqhubeke nephulo labo kwi-1.28300.
I-USDCAD igcina i-Waxing yomelele emva kokubetha kwiNkxaso yeVeki
Uhlalutyo lwexabiso le-USDCAD-Novemba 18
I-USDCAD igcina i-waxing yomelele emva kokuba iqhube phezulu ukusuka kwinqanaba lenkxaso yeveki kwi-1.23000. Ubutyebi beemarike baqala ukuthatha enye imilo njengoko amakhandlela emihla ngemihla achukumisa kwinqanaba lexabiso le-1.23000 ngomhla we-20 ka-Oktobha. Imarike ke yathatha imilo esezantsi engqukuva, apho imvuselelo ye-bullish yafunyanwa. Ukusuka apho, impumelelo yokuqala yayikukuphula ukuchasana kwangoko kwi-1.24700, emva koko i-USDCAD igcina i-waxing yomelele.
Iindawo zokuchasana: 1.24700, 1.26790
Iindawo zokuxhasa: 1.23000, 1.20300
I-USDCAD yayiqale i-uptrend emva kokuba iququzelele ukuvuselelwa kwe-bullish kwi-market market ngoMeyi 12th, xa ixabiso lawela kwinqanaba lenkxaso ye-1.20300. Ukusuka apho, imakethi ihlala isomelela kwaye ingcolisa iindawo ezininzi ezibalulekileyo kwindlela yayo yokunyuka. Oku kwaqhubeka de ixabiso lehla malunga ne-1.28300 yokumelana nendawo, eyakhokelela ekuhlahleni kwexabiso.
Idiphu ye-bearish yanqunyulwa kwi-1.23000 njengoko ukuvuselelwa kweemarike kuququzelelwa. Ngaphezu koko, i-market yenza ukuvuselelwa kweli nqanaba lithetha, kwimbono jikelele, i-USDCAD isenayo i-bullish njengoko yenza i-low low kweli nqanaba lexabiso. Ixabiso lihlala linyuka njengoko litsiba kumgca ophakathi weBollinger Band kwaye ngoku lirhweba kufutshane nomda walo ongasentla. I-MACD (i-Moving Average Convergence Divergence) igcina ukubonisa i-bullish histogram bar ukugxininisa amandla akhoyo ngoku kwimarike.
Itshathi yeeyure ze-4 ibonisa indlela ecacileyo yemarike kunye nethemba. Ixabiso ekuqaleni lalinomceli mngeni wokuphula i-1.24700 ukuchasana, ekugqibeleni lenze ngoncedo lomda ophantsi we-Bollinger Band. Oku kunjalo kwakhona kwimeko yokuqhawula i-1.25790. I-MACD inomnye umnqamlezo wegolide, nangaphezulu kwinqanaba le-zero, njengoko imarike ilungiselela umgangatho ophezulu.
I-USDCAD iqikelelwa ukuba iphule ngaphaya kwe-1.26500 ngepompo eya kufikelela kwi-1.28300.
I-USDCAD Ifumana iNqanaba lokuRhweba kwiNqanaba eliBalulekileyo leMfuno
Uhlalutyo lwexabiso le-USDCAD-Novemba 10
I-USDCAD ifumana indawo yokuhlangana kwinqanaba elibalulekileyo le-1.23000. Imakethi yehla inyuka ekuqaleni kuka-Okthobha, kwaye ixabiso liqhubekile nokuhla ukusukela ngoko. Njengoko ixabiso lehla, i-USDCAD ifumana iindawo ezibuthathaka ezidibeneyo kwi-1.25790 kunye ne-1.24700 iindawo ezibalulekileyo kwaye zawela kuzo. Nangona kunjalo, i-1.23000 ibonakalise ukuba iyakwazi ukuba yindawo yokuhlangana kubathengi. I-USDCAD, ke, ngoku ijonga i-U-turn.
Iindawo zokubonelela: 1.30330 1.28300, 1.26500
Iindawo ezifunekayo: 1.25790, 1.24700, 1.23000
Indawo yangaphambili yokuhlangana kwimarike yayikwindawo ebaluleke kakhulu ye-1.20300. Iinkunzi zeenkomo zixhobise eli nqanaba ukuze zenze i-U-turn kwimarike emva kokuba imarike ibuyele ezantsi kwiinyanga ezininzi ezifika kunyaka ka-2020. Ukuguqulwa kwexabiso ekugqibeleni kwaphunyezwa ekuqaleni kukaMeyi. Oku kukhokelele kwindibano apho ixabiso lenyuke ngomyinge we-8%. I-USDCAD yaqala ukuwa kwakhona emva kokugatywa ngokuphindaphindiweyo kwinqanaba lexabiso le-1.28300.
Emva kokufumana i-rally point eyomeleleyo kwi-1.23000, i-USDCAD ngoku izama ukwenza enye intengo yokuguqulwa kwexabiso. Imarike sele icingele ukubunjwa okusezantsi okugobileyo, esele iyindlela yokubuyisela umva. I-Parabolic SAR (Stop and Reverse) iphinda iqinisekise i-U-turn kunye namachaphaza amaninzi ngaphantsi kwamakhandlela emihla ngemihla. I-MACD (i-Moving Average Convergence Divergence) nayo inemigca yayo ewela enye ukuya phezulu ukusuka ngaphantsi kwinqanaba le-zero, oku kuhamba kunye nokwandisa imivalo ye-histogram eluhlaza.
Itshathi yexesha elifutshane libonisa ukuba nangona ixabiso eliqhubekayo le-U-turn, kukho ukuchasana nokunyuka kwe-USDCAD kwinqanaba elibalulekileyo le-1.24700. Yiyo loo nto, amachaphaza eParabolic SAR atshintshele phezulu kwiziphatho zekhandlela zeyure ezi-4. Isalathisi se-MACD sikwabonisa umgca wayo wokuhla ukusuka phezulu kwinqanaba le-zero, emva kokuwela ngaphambili. Ukubuyiselwa kwindawo yokuhlangana kwi-1.23000 ingaba kukuxhotyiswa okufunekayo kwiinkunzi zeenkomo ukuphula inkcaso yangoku ukuya phezulu kwe-USDCAD.
I-USD / CAD igcina umkhethe weBullish!
I-USD / CAD isibini sithengisa ngokubomvu kwinqanaba le-1.2450 ngexesha lokubhala. Uxinzelelo luphezulu njengoko i-Dollar Index iye yandisa ukuhla kwayo. Ngokobuchwephesha, ixabiso limi ngaphantsi kwamanqanaba okumelana okuqinileyo, ngoko ke ukukhula okuqhubekayo akuqinisekanga.
I-USD yehla kancinci kwixesha elifutshane nokuba i-NFP yase-United States kunye neNqanaba lokungaSebenzi lifike lingcono kunokuba lilindelwe. Kule veki, isiganeko esiphambili simelwe yidatha ye-inflation yase-US. I-CPI kunye ne-Core CPI ziya kukhutshwa ngoLwesithathu. La manani anokuba sigqibo.
I-USD / CAD inyuke phezulu ngaphakathi kwepateni yetshaneli ephezulu. Ukuhlehla okwexeshana ngandlel' ithile bekulindelekile emva kokusilela ukukhupha umgca othe ngqo wetshaneli. Ngokobuchwephesha, ayiphumelelanga ukufikelela kumgca we-150% weFibonacci kumzamo wangaphambili, ngoko ke ngokobuqu, ndiyakholelwa ukuba izinga lingafikelela kuyo.
Ukuqhawuka okusebenzayo ngalo mgca kunokubhengeza ukuqhubeka okunokwenzeka. Isenokuqalisa kwakhona intshukumo yayo ukuya phezulu nje ukuba ihlala ingaphezulu kwe-1.2436 inkxaso emileyo, eyayifudula iphantsi. Umgangatho omtsha ophezulu unokuzisa amathuba amatsha.
tags Forex, ukuseta urhwebo, USD / CAD
I-USDCAD Iyancipha Emva kokubetha iNqanaba eliKhulu lokuchasa
Uhlalutyo lwexabiso le-USDCAD-Novemba 3
I-USDCAD iyancipha emva kokubetha ixesha layo lonke kwinqanaba elibalulekileyo le-1.470. I-USDCAD iyancipha emva kokuba imarike igqabhuke kwinqanaba eliphezulu langaphambili le-1.300 ngo-Oktobha 11th, i-2018, kunye neentloko ze-20 Matshi 2020 entsha. ide ifike kwindawo entsha yexesha lonke ye-1.470. Nangona kunjalo, njengoko imarike ibetha inqanaba lokumelana, iyancipha kwaye iyancipha kwinqanaba lendawo yenkxaso ye-1.190.
USDCAD Iindawo ezibalulekileyo
Amanqanaba enkxaso: 0.940, 1.190
Amanqanaba okumelana: 1.300, 1.470
USDCAD Ixesha elide Trend: Ukusukela
Emva kokuba imarike ibethe i-high-time entsha kwaye iyancipha kwixabiso lemarike ye-1.190, ixabiso liye lanyuka ukuze lihlaziye inqanaba eliphezulu langaphambili. Nangona kunjalo, njengoko ixabiso lijongene nomgca wokumelana, liyancipha kwakhona kwaye ixabiso lemarike libuyela kwinqanaba lenkxaso ye-1.190, ngaphantsi kwe-1.300.
Imakethi izama ukubuyisela intshukumo ye-bullish kodwa yabanjwa kwinqanaba lexesha langaphambili le-1.300 kwaye iibhere ziyayityhalela phantsi ibuyele kwinqanaba lokumelana. I-USDCAD ngoku ikwinqanaba lenkxaso kunye nesenzo sokudibanisa, esinokuba yindlela yokuqokelela amandla okunyusa ixabiso lemarike kwaye libethe ngamandla ngokuchasene nenqanaba lokumelana.
I-USDCAD yeXesha eliFutshane leNdlela: Ukulinganisa
Kwixesha le-4hour, i-USDCAD ifunyenwe idibanisa phakathi kwexabiso lemarike yezinga lenkxaso ye-1.230 kunye nenqanaba lokumelana ne-1.240. Imakethi yafunyanwa iguqukile kulo mmandla. Kumgca we-Exponential Moving Average (EMA), ixabiso libonwa linyuka liphuma kwikhandlela le-bullish ngokulandelelanayo, nto leyo ebonisa imeko enokwenzeka ye-bullish eyenzeka kwimarike. Oku kuthetha ukhetho olunokwenzeka lokuthenga kwimarike.
I-USD / CAD Uxinzelelo oluPhezulu!
I-USD / CAD isibini sibonakala singenasiphelo kwixesha elifutshane, mhlawumbi abahwebi balindele idatha yezoqoqosho yase-United States ngaphambi kokuthatha inyathelo. Ngexesha elifutshane, uxinzelelo oluphezulu luhlala lunjalo njengoko i-Dollar Index inokuqalisa ukukhula kwayo emva kokuhlehla kwangoku.
I-US ISM Manufacturing PMI inokuzisa ubomi kwi-USD / CAD. Isalathisi sinokuhla ukusuka kwi-61.1 ukuya kwi-60.4 amanqaku. Okungcono kunokuba kulindelwe i-ata inokunyusa i-USD, ngelixa imbi kunokuba idatha ilindeleke ingenza buthathaka i-greenback.
I-USD / CAD imele ngaphezu kwe-pivot yeveki ye-1.2370 kwaye ilungile phantsi komgca ophezulu we-median (UML). Ukungaphumeleli kwayo ukusondela kunye nokufikelela kwindawo yenkxaso ye-1.2308 - 1.2302 ibonise ukuba abathengi banamandla kwixesha elifutshane.
Ukuzinzisa ngaphezu kwendawo yepivot kunye nokwenza i-upside breakout ngaphezu komgca we-median ephezulu (UML) inokuzisa amathuba amatsha amade. Ukuqhawuka kwe-upside kusondele ukuba isibini sihlala kufuphi nomgca ophezulu we-median (UML).
Ireyithi yehle ukuze ivavanywe kwaye iphinde ivavanye i-pivot yeveki kuphela ngenxa yokuba i-DXY ihlehlile. Ukwenza umgangatho omtsha ophezulu kunokubhengeza intshukumo eyomeleleyo ukuya phezulu.
I-USDCAD Ifumana ukuQiniswa kweBullish kwiNqanaba leNkxaso ye-1.23000
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCAD-Okthobha 27
I-USDCAD ifumana ukuqiniswa kwe-bullish kwinqanaba lenkxaso ye-1.23000 emva kweentsuku ezininzi zokulahla imarike. Ngomhla we-1 ka-Okthobha, ixabiso lawela ngaphantsi kwe-uptrend line kwaye, ngaxeshanye, ixesha le-EMA 20 (I-Exponential Moving Average). I-USDCAD iphantsi kwe-downtrend ukususela ngoko kwaye ukungenelela kwi-1.25790 kunye ne-1.24700 yayingenamandla ngokwaneleyo ukuxhathisa ukuwa kweemarike. Ekugqibeleni iwela kwi-1.23000, ukuqiniswa kwe-bullish kuqeshwe ukunyanzela ukuguqulwa kweemarike.
Amanqanaba okumelana: 1.28300, 1.26500
Amanqanaba enkxaso: 1.24700, 1.23000
I-USDCAD iye yajikeleza phezulu ide ifumane ukuchasana okungenakufikeleleka kwi-1.28300. Inqanaba lokuxhathisa linceda ukumisa ukuphakama okuphezulu okungaguquguqukiyo kwimarike. Kodwa ngexabiso lisahamba kwi-uptrend, i-bearish momentum yayigcinwa. Ngomhla we-7 kaSeptemba, abathengi bazama ukunyanzela nge-1.28300 ukuchasana. Oku bakwenza ngokwenza imarike ibengunxantathu olinganayo. Xa ixabiso lavela, liye lawela kwinqanaba lexabiso kodwa lifumana ukuxhathisa okukhulu.
Emva koko, i-USDCAD iqala ukuncipha kwimpembelelo yayo yokunyuka. Emva kwexesha elithile, abathengisi babamba kwaye baphosa imarike ngaphantsi kwe-trendline kunye nexesha le-EMA 20. I-USDCAD yahlala ihla ide ifumane ukuqiniswa kwe-bullish eyomeleleyo kwi-1.23000. Imarike ngoku iqalile inkqubo yayo yokubuyisela umva. Uvavanyo lokuqala kukuphula phezulu kwixesha le-EMA 20. Imarike isendleleni yokwenza oku njengoko i-EFI (i-Elders Force Index) intambo yamandla isondela kwinqanaba le-zero ukusuka kwixabiso elibi.
Kwitshathi yeeyure ze-4, imarike ithathe i-round-down reversal. Ixesha le-EMA le-20 liye latshintsha ngokuthe ngcembe ukusuka phezulu kwimarike ukuya ngaphantsi kweemarike, lisebenza njengenkxaso yexabiso kunye nokulityhalela phezulu. I-EFI ihleli ibalulekile kumgangatho wokulingana kodwa inomkhethe omncinci ngokubhekiselele kwixabiso elilungileyo. Oku kubonisa ukuba iinkunzi zenkomo ngokuthe ngcembe zifumana umhlaba emarikeni.
Ukuqiniswa okutsha kufuneka kuncede abathengi ngaphezu kwenqanaba lexabiso le-1.24700.
I-USDCAD yehla ngokuqhubekayo emva kokutyibilika kwi-Uptrend yayo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCAD-Okthobha 20
I-USDCAD yehla ngokuqhubekayo emva kokushenxisa intshukumo yayo. Imakethi yaqala ukubonakala nge-30th kaSeptemba, yatshona kumgca wokunyuka. Ngomhla olandelayo, ixabiso liye lehla ngaphantsi komgca wokunyuka kwaye waxhaswa kuphela kwinqanaba lexabiso le-1.26500. Ikhandlela elilandelayo lemihla ngemihla labonwa lingaphantsi kwenqanaba lamaxabiso. Kwakukho ukubuyela umva ukuya kwi-1.26500 ngaphambi kokuba imakethi iqhubeke nokuntywila.
Amanqanaba abalulekileyo e-USDCAD
Amanqanaba okumelana: 1.24700, 1.26500, 1.28300
Amanqanaba enkxaso: 1.23000, 1.21500, 1.20300
I-USDCAD iqale ngempumelelo intshukumo yayo ye-22nd kaJuni emva kokunyuka kwamaxabiso okuphumla kwinqanaba eliphambili le-1.23000. Ixabiso laqala ukunyuka phezulu, kudala ukuphakama okuphezulu kunye nokuhla. Oku kuqhubekile de amandla okunyusa amandla acinezelwe kwi-1.28300. Iimarike azizange zenze ukuba zidlule kweli nqanaba njengoko kuphela i-wick ende yekhandlela lemihla ngemihla ibonakala ngaphezu kwezinga.
Emva koko, imarike iqala ukuba buthathaka, ukuphazamiseka amaxesha ngamaxesha ngokuchasene nomgca wokunyuka. Ekugqibeleni, i-USDCAD yehla ngaphantsi komgca wokuhamba kunye nenkxaso kwi-1.26500. Ukubuyiswa okukhawulezileyo kwenziwa ngokuchasene nenqanaba lamaxabiso ngaphambi kokuba intengiso yehle ngokuqhubekekayo, iwela kumanqanaba aphambili. Imakethi ngoku iqokelela ngaphezulu kwe-1.23000 yokuqhekeza ukuhla.
Imakethi isagcwele umfutho oya ezantsi. Oku kuboniswa yi-RSI (Isalathiso saMandla esiManyeneyo) esinomgca womqondiso ohamba ngaphezulu kwendawo ethe kratya. Nangona kunjalo, ixabiso liqokelela kuphela kwinqanaba lokuxhasa i-1.23000. Amachaphaza atshintshayo e-Parabolic SAR (Yima kwaye uphinde ubuye umva) aqinisekisa ukuba amaxabiso okwangoku aqokeleleka kweli nqanaba ngaphambi kokuba liwele phambili.
I-USDCAD inokuthi yehle isezantsi njenge-1.20300 ngaphambi kokuba ibuye.
I-USDCAD yehla ukusuka kwi-Uptrend Direction
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCAD-Okthobha 13
I-USDCAD yehla ukusuka kwinqanaba layo emva kokuba isilele ukwaphula inqanaba lokumelana ne-1.28300. Imarike kutsha nje isinde kukothuka xa yehle kancinci ukusuka kumgca wokunyuka phantsi koxinzelelo oluvela kwi-1.26500. Kodwa ixabiso lenze kakuhle ukubuyisa ngaphezulu kwenqanaba lamaxabiso kwaye emva koko layisebenzisa njengendawo yokuphakamisa intaba ukunyuka phezulu. Nangona kunjalo, amandla anyukayo emarike acinezelwe kwi-1.28300, apho amaxabiso ehla khona.
Amanqanaba enkxaso: 1.20300, 1.21500, 1.23000
I-USDCAD iqale ukuphakama kwayo kwinqanaba le-1.20300 kwaye ibihamba ngokuthe chu inyuka, idlula kumanqanaba athile abalulekileyo. Uxinzelelo lwe-Bearish landa kancinci njengoko intengiso inyuka inyuka. Oku kwabonakala xa ixabiso lehle ngezantsi komgaqo we-2 kaSeptemba, kodwa imarike yabuya ngokukhawuleza ngaphambi kokuba iibhere ziqale ukusebenza kuyo. Nangona kunjalo, emva kokubetha i-1.28300 ngomhla we-20 kaSeptemba, imarike iye yaya buthathaka.
I-USDCAD, ke, iyasilela ukudlula kwinqanaba eliphambili le-1.28300 njengoko amaxabiso esihla esiya kwi-1.24700. Isalathi-sar SAR (Yima uphinde ubuye umva) isalathi siqinisekisa ukuba ukwehla kwexabiso kuqalile emva kokuba imakethi iyaliwe kwi-1.28300. Amachaphaza avela kwisalathi ahlala ngaphezulu kwamakhandlela emihla ngemihla kude kube namhlanje. I-Stochastic Oscillator inemigca yokuhamba ukusuka kummandla othengiweyo ukuya kummandla ogqithisiweyo. Oku kuthetha ukuba i-USDCAD iye yatshintshela kwintsimi ye-bearish.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, amaxabiso anokubonwa xa esabela kwinqanaba eliphambili le-1.24700. Iinkunzi zeenkomo zifuna imvuselelo njengexabiso lokuhla. Isalathiso seParabolic se-SAR sihlala ngaphezulu kwintengiso kwitshathi yeeyure ezi-4, ngelixa imigca ye-Stochastic Oscillator ibuyele kummandla ogqithileyo emva kwempindezelo emfutshane.
Iibhere zihlala zilawula intengiso njengoko i-USDCAD isondela kwi-1.23000.